အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ပထွေးကို..အာခေါင်ခြစ်ပြီး. ကာကွယ်နေသူများအတွက်
International တွေဝင်လာမဲ့ယခုခေတ်မှာ ..
ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ပြန်လည်အဖတ်ဆည်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ..၊
တရုတ်နဲ့ ရုရှား ၊မြောက်ကိုးရီးယားတို့ဟာ..
အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေဆီက အကူအညီရဖို့.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:03 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook